I-Philips isungula uluhlu lwe-IPS kunye ne-FreeSync esweni ngamaxabiso eengxoxo | Iindaba zeGajethi
UMiguel Hernandez | | Iikhompyuter, Iziphaluka
UPhilips uyayazi indlela yokwenza esweni, Uyayazi loo nto kuba ngaphezulu kwesihlandlo esinye siye sakwazi ukuhlalutya izixhobo zaboKwaye inkampani ijolise ekunikezeleni owona mxholo ngowona maxabiso asemarikeni, kwaye kakhulu ukuba uyayiphumeza. Ngoku kubonakala ngathi Uluhlu olutsha lwezixhobo luyavela oluza kutsala abaphulaphuli abaninzi abathanda imidlalo yevidiyo.
Ezi modeli zibandakanya iiphaneli ze-IPS kunye neFreeSync ukusuka kumaxabiso ajikeleze i-189 yeeRandi kunokuba yinto eza kwaziwa njengoluhlu olutsha lwe-E9. Hlala nathi kwaye siya kumazi ngokunzulu ngakumbi.
Kule nto iya kusebenzisa i-MMD yayo yenkxaso, kwaye ezi monitors zintsha zabo bonke abasebenzisi ziya kutsala umdla omkhulu. Kulindeleke ukuba babizwe ngokuba yi-E-Line, okanye i-E9, iimonitha ezinomdla kunye neempawu ezisisiseko phantse kuwo nawuphi na umdlali, kodwa ngamaxabiso azakuqala € 189, elingelilo ixabiso eliphezulu kuqwalaselwa kwezi mpawu. Ewe iimodeli akukho lula ukuzinkqaya, siphambi kwe- 276E9QSB, 276E9QDSB kunye 276E9QJAB, akukho nto ingako kwaye akukho nto iphantsi. Siyabona ukuba ubungakanani bepaneli bufanayo, ii-intshi ezingama-27, kwaye ziya kwahluka ngokukuko kunxibelelwano.
Umzekelo, owona mzekelo mde, I-276E9QJAB ibandakanya, ukongeza kwi-HDMI kunye neVGA, a DisplayPort. Ukongeza, ngokudibeneyo baya kuba neepaneli ze-IPS ezingama-27 intshi ngesisombululo esiphezulu se I-1080p (i-FullHD) kunye nenqanaba lokuhlaziya le-60 Hz, eya kuthi yona ibonelele nge-5ms ye-latency, ayisiyiyo eyona iphantsi kwintengiso, kodwa yanele umdlalo oqhelekileyo. Kwelinye icala, zinomgangatho olungileyo wombala, kuba zigubungela uluhlu lwe-124% kwi-sRGB kunye ne-93% kwi-NTSC. Asinayo imihla yokuphehlelelwa ngokusesikweni nangona siza kuthetha neqela le-Philips PR ukuqinisekisa zonke iinkcukacha zala magosa anokuba lapha ngoMatshi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Iikhompyuter » UPhilips usungula uluhlu lweemonitha ze-IPS kunye neFreeSync ngamaxabiso ahlekisayo